Ho lehibe ny ady eo amin'ny Etazonia sy Iran? | Apg29
Ho lehibe ny ady eo amin'ny Etazonia sy Iran?
Ny US fanafihana balafomanga mety hitarika ho amin'ny ady lehibe iray any Afovoany Atsinanana, hoy Rouzbeh Parsi, manam-pahaizana amin'ny Afovoany Atsinanana ny UI.
Ny mety hisian'ny fanafihan'ny mpampihorohoro eto amin'izao tontolo izao dia mitombo. Fiakaran'ny vidin'ny solika ireo, izay nahita androany rehefa feno ny fiara.
Maty tany drönarattack
Amin'ny alina namono US Qassem Soleimani, lohan'ny ny sangany ny IRGC Quds hery, ny drönarattack ivelan'ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Bagdad.
Na dia ny Irakiana lehiben'ny milisy Abu al-Mahdi Muhandis no maty ary ny iray hafa enina no maty ary maro hafa no naratra.
Ao amin'ny baiko ny Trump
Ny American drönarattacken dia nitarika ny baiko ny Filoha Donald Trump.
US Department of Fiarovana isa avy Soleimani noho ny rehefa voazaha toetra ny fanafihana balafomanga iray tamin'ny herinandro lasa teo akaikin'ny toby miaramila Irakiana Kirkuk any Iraka, izay misy olom-pirenena Amerikana no maty ary efatra no naratra miaramila Amerikana.
Taorian'ny fanafihana ny Etazonia namaly tamin'ny rivotra bebe kokoa an'i Iran fitokonana tohanan'ny Shiita milisy Hezbollah andia ao Iraka. Olona 25 no namoy ny ainy, izay nitarika ny hetsi-panoherana mahery setra ivelan'ny Masoivohon'i Etazonia any Bagdad.
Dia nanafika ny masoivoho
Ao amin'ny Taom-baovao masoivoho Eva no nanafika ny mpanao fihetsiketsehana. Araka ny Tokony Qassem Soleiman no ao ambadiky ny talata rehefa nanafika ny Masoivoho.
US izao dia miantso ny olom-pirenena Amerikana izay any Iraka mba hiala avy hatrany ny firenena.
Ho lehibe ho ady ankehitriny eo amin'ny Etazonia sy Iran? Tokony hanaraka ny haino aman-jery sy ny fihetseham-po ny asa soratr'i, noho izany dia toa ny mahita fa ny haino aman-jery toa tia azy. Na ahoana na ahoana, nitsoka ny "fanantenana" ho an'ny ady toy izany.
Ankoatra izany, Heveriko fa ho ratsy ny Iran ny "ady mahery fo" Qassem Soleimani dia araka Etazonia sy ny Vondrona Eoropeana na mpampihorohoro. Kanefa izany tsy midika tsy maninona ny Etazonia ny hamono olona.
Koa Qassem Soleimani Tian'Andriamanitra koa ianareo izay mamaky izany. Mila an'Andriamanitra mihoatra noho ny hatramin'izay.
Ary ahoana no hahazoana mitana Andriamanitra? Amin'ny alalan'ny fanekena ny Zanany Jesoa Kristy. Avy eo dia ho voavonjy ka hahazo famelan-keloka rehetra.
Source: SVT, Aftonbladet, Expressen.